अन्ततः लोकप्रिय गायक यम बरालले खोले गोप्यदोश्रो बिबाह बारे मुख! (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > अन्ततः लोकप्रिय गायक यम बरालले खोले गोप्यदोश्रो बिबाह बारे मुख! (भिडियो सहित)
admin January 14, 2022 जीवनशैली, मनोरञ्जन, समाचार 0
काठमाण्डौ । लोकप्रिय गायक यम बरालले आफ्नो दोस्रो विवाह छोराको कारणले गोप्य राखेको बताएका छन् ।
‘अहिले सामाजिक संजालमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक टिकाटिप्पणी धेरै हुने गरेको छ । मैले विवाह सार्वजनिक गर्दा पनि विभिन्न टिकाटिप्पणी हुनसक्थ्यो’ बरालले भने, ‘मेरो छोरो भर्खरकै छ । उसले ती सबैकुरा बुझ्दैन । उसको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भन्ने मेरो चाहाना हो ।’